2 Ɔsram a ɛto so ason+ no da a ɛto so aduonu biako no, Yehowa ka kyerɛɛ odiyifo Hagai+ sɛ: 2 “Hwɛ, ka kyerɛ Sealtiel+ ba Serubabel+ a ɔyɛ Yuda amrado,+ ne Yehosadak+ ba Yosua+ a ɔyɛ ɔsɔfo panyin, ne ɔman no nkae sɛ, 3 ‘Henanom na wɔda so wɔ mo mu a wohuu sɛnea na fie yi anuonyam te kan no?+ Na afei muhu no dɛn? Sɛ mode toto kan de no ho a, ɛnyɛ adehunu wɔ mo ani so anaa?’+ 4 “‘Enti afei Serubabel, hyɛ wo ho den;+ Yehosadak ba ɔsɔfo panyin Yosua nso, hyɛ wo ho den,’ Yehowa asɛm ni. “‘Asase no sofo nyinaa nso, monhyɛ mo ho den, na monyɛ adwuma,’+ Yehowa asɛm ni. “‘Meka mo ho,’+ asafo Yehowa asɛm ni. 5 ‘Monkae asɛm a me ne mo yɛɛ ho apam bere a mufi Egypt bae,+ bere a me honhom+ gyina mo mu no. Munnsuro.’”+ 6 “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Na ɛbɛba bio​—ɛrenkyɛ koraa+​—sɛ mɛwosow ɔsoro ne asase ne po ne asase kesee.’+ 7 “‘Na mɛwosow amanaman nyinaa, na aman nyinaa mu nnepa bɛba,+ na mede anuonyam bɛhyɛ ofie yi mã,’+ asafo Yehowa na waka. 8 “‘Dwetɛ yɛ me dea, na sika nso yɛ me dea,’+ asafo Yehowa asɛm ni. 9 “‘Ofie foforo yi anuonyam bɛsen kan de no,’+ asafo Yehowa na waka. “‘Na mɛma asomdwoe aba ha,’+ asafo Yehowa asɛm ni.” 10 Dario afe a ɛto so abien, ɔsram a ɛto so akron no da a ɛto so aduonu anan no, Yehowa ka kyerɛɛ odiyifo Hagai+ sɛ: 11 “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Bisa asɔfo no mmara+ no ho asɛm sɛ: 12 “Sɛ obi de nam kronkron gu n’atade mu, na ɔde n’atade no ka paanoo anaa aduan a wɔanoa anaa bobesa anaa ngo anaa aduan foforo biara a, so ɛbɛyɛ kronkron?”’”+ Ɛnna asɔfo no buae sɛ: “Dabi!” 13 Hagai toaa so bisae sɛ: “Na sɛ obi a efunu* ama ne ho agu fĩ so nneɛma yi bi mu a, ɛho begu fĩ anaa?”+ Na asɔfo no buae sɛ: “Ɛho begu fĩ.” 14 Ɛnna Hagai kae sɛ: “‘Saa na nkurɔfo yi te, saa na ɔman yi te wɔ m’ani so,+ na saa na wɔn nsa ano adwuma ne biribiara a wɔde ba hɔ te. Ɛho agu fĩ,’+ Yehowa asɛm ni. 15 “‘Efi saa da yi rekɔ, munsusuw asɛm yi ho wɔ mo komam+ sɛ ansa na wɔde ɔbo reto ɔbo so wɔ Yehowa asɔrefie,+ 16 bere a saa nsɛm no sisii no, sɛ obi ba awi a wɔaboa ano ho sɛ obenya susukora aduonu a, ɛdan du; na sɛ obi ba nsã-kyi-amoa ho sɛ ɔbɛsaw susukora aduonum a, ɛdan aduonu.+ 17 Mede ɔhyew+ baa mo so na memaa ɔyare tew sii mo mfuw mu,+ na memaa amparuwbo+ baa mo so, ne mo nsa ano adwuma+ nyinaa so, nanso mo mu biara ansan amma me nkyɛn,’+ Yehowa asɛm ni​— 18 “‘Munsusuw asɛm yi ho wɔ mo komam;+ efi saa da yi, ɔsram a ɛto so akron no da a ɛto so aduonu anan, da a wɔtoo Yehowa asɔrefie no fapem+ no, munsusuw asɛm yi ho: 19 So aba bi da so ara wɔ awikorabea?+ Na ebesi nnɛ no, bobe ne borɔdɔma ne granate akutu* ne ngodua asow anaa? Efi saa da yi rekɔ mehyira mo.’”+ 20 Na ɔsram no da a ɛto so aduonu anan+ no, Yehowa ka kyerɛɛ Hagai+ ne mprenu so sɛ: 21 “Ka kyerɛ Yuda amrado+ Serubabel sɛ, ‘Mɛwosow ɔsoro ne asase.+ 22 Na mɛka ahenni ahengua abutuw na masɛe ahemman ahoɔden;+ mehuan teaseɛnam ne ne kafo ase na apɔnkɔ ne wɔn sotefo ahwehwe ase,+ na obiara bɛtɔ ne nua nkrante ano.’”+ 23 “‘Saa da no,’ asafo Yehowa asɛm ni, ‘mɛfa wo, Sealtiel+ ba Serubabel,+ m’akoa,’ Yehowa asɛm ni; ‘na mede wo besi hɔ sɛ nsɔanokaa,+ efisɛ wo na mapaw wo,’+ asafo Yehowa asɛm ni.”+